Motion Detection Featureကို iPhoneအတွက် စမ်းသပ်နေ ~ The ICT.com.mm Blog
Motion Detection Featureကို iPhoneအတွက် စမ်းသပ်နေ
Appleမှ Motion Detection Feature စမ်းသပ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ နည်းပညာသည် သုံးစွဲသူ၏ ဦးခေါင်းများကို လှုပ်ရမ်းရုံဖြင့် iPhoneကို ထိန်းချုပ်နိုင်မည့် နည်းပညာတစ်ရပ် ဖြစ်သည်။ ယင်း နည်းပညာ အသစ်ကို Apple နောက်ဆုံးထွက် iOS7၏ Developer Versionတွင် တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး အများပြည်သူ သုံးစွဲနိုင်ဦးမည် မဟုတ်သေးကြောင်း သိရသည်။ iPhone သို့မဟုတ် iPadမှာပါရှိတဲ့ ကင်မရာကို မျက်နှာမူပြီး ဦးခေါင်းလှုပ်ရှားမှုဖြင့် အလုပ်လုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဦးခေါင်းကို ဘယ်ညာ လှုပ်ရမ်းခြင်းအားဖြင့် လက်ရှိ လုပ်ဆောင်နေရာမှ အခြားတစ်ခုသို့ ပြောင်းလဲဖွင့်ခြင်း၊ Main Home Screenသို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိသွားခြင်း၊ Notificationများကို ကြည့်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ iOS စနစ်အတွက် နောက်ဆုံး Version များသည် စမ်းသပ်နေဆဲ ဖြစ်ပြီး Developerများက Featureများအလိုက် App အသစ်များ ဖန်တီးလျက် ရှိသည်။ အသုံးပြုသူ၏ လှုပ်ရှားမှုအလိုက် လုပ်ဆောင်သော နည်းပညာသည် ကွန်ပျူတာ နည်းစနစ်များတွင် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်များအတွင်းက ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီး Motion Control Optionသည် စမတ်ဖုန်းများတွင် နောက်ပိုင်းကာလများ၌ ခေတ်စားလာသည်။ နောက်ဆုံးထွက်ရှိလာသည့် Samsung Galaxy 4တွင် မျက်လုံး၏ တည်နေရာအလိုက် လုပ်ဆောင်နိုင်သော လက္ခဏာသစ်များ ပါ၀င်လာသည်။ ဗီဒီယို ကြည့်ရှုနေရာမှ အေ၀းသို့ ရောက်သွားသည့်အခါ အလိုအလျောက် ရပ်တန့်သွားသည်။S 4တွင် လက်ဟန်ခြေဟန် ပြရုံဖြင့်လည်း လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ ဖုန်းခေါ်ဆိုလာသည့် အခါတွင် ဖုန်းအပေါ်မှ လက်ကို ဖြတ်သန်းပြီး ဖုန်းပြောဆိုနိုင်သည်။
Ref : edition.cnn.com
Newer ကွန်ပျူတာကို အသုံးပြုနေသူများအတွက် လိုအပ်သည့် နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ရန် အချက်များ
Older ၂၀၁၄ခုနှစ်ကုန်တွင် Carlsberg ဘီယာ စတင် ထုတ်လုပ်မည်
iPhone 12 mini နဲ့ 12 Pro Max တွေက အလွန်အကြမ်းခံတယ်လို့ JerryRigEverything ဆိုတဲ့ YouTube ချန်နယ်က စမ်းသပ်ပြခဲ့ပါပြီ
iPhone 12 mini နဲ့ 12 Pro Max တွေကို စတင် ရောင်းချနေပြီး လူတွေလက်ထဲလည်း ရေ...
Appleက မျက်နှာပြင်ကြီး iPhoneများကို စက်တင်ဘာလ ကိုးရက်တွင် ကြေညာမည်ဟုဆို
Appleက စက်တင်ဘာလ ကိုးရက်နေ့တွင် မျက်နှာပြင်ကြီး iPhoneများကို မိတ်ဆက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ အတွင်းသိတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ ကယ်လိုဖိုးနီးယာ...
iPhoneနဲ့ iPadများမှာ နေရာလွတ်များရရှိစေမယ့် နည်းများ
iPhoneနဲ့ iPadကို အသုံးပြုတာ ကြာလာတာနဲ့ အမျှ နေရာလွတ်များ နည်းပါးလာမှာပါ။ Appsနဲ့ ဖိုင်တွေက သင့်ရဲ့ iDeviceမှာ တစ်ဖြည်းဖြည်းနေရာယူလာကြပ...
အသုံး၀င် iPhone Tricks ဆယ်ခု
iPhoneဟာ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့စမတ်ဖုန်းဆိုတာ ငြင်းမရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် iPhoneရဲ့ Settingsတွေကို သင့်ရဲ့ အသုံးပြုပုံပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲအသု...
iPhoneကို ကြိုးမဲ့အားသွင်းပေးနိုင်တဲ့ Charger+Case
iPhoneကို အားသွင်းပေးနိုင်တဲ့ Chargerများစွာ ရှိပေမယ့် ကြိုးနဲ့ ချိတ်ဆက်ရတာတွေ၊ သယ်ယူရခက်ခဲတာတွေ စတဲ့ ပြဿနာများရှိပါတယ်။ အခုအခါမှာတော့ ...
Featured, How-to, Mobile, Review
သင် iPhoneကနေ Android ပြောင်းကိုင်ဖို့ စဉ်းစားနေသလား?
သင် iPhoneကနေ Android ပြောင်းကိုင်ဖို့ စဉ်းစားနေသလား? အခုဆောင်းပါးမှာ iPhoneက Contacts, Photos, Videoနဲ့ အခြားဒေတာတွေကို Galaxy S5 ဆီသ...
iPhone မှာ ဖုန်းနံပါတ်တွေရဲ့ Extension တွေကို အလိုအလျှောက် ခေါ်ဆိုအောင် ပြုလုပ်နည်း
စမတ်ဖုန်းတွေဟာ ဖုန်းနံပါတ်တွေကို မှတ်သားပေးနိုင်တဲ့ အတွက် ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာ ဖုန်းနံပါတ်တွေ ကို မှတ်သားစရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖုန်...
iPhone အတွက် အကောင်းဆုံး Calendar App များ
Apple ရဲ့ Calendar App ထက်ကောင်းတဲ့ Calendar Apps တွေ iTunes App Store မှာ များစွာ ရှိပါတယ်။ ရွေးချယ်စရာများစွာ ထဲမှာ Sunrise က စွမ်းဆေ...
iPhone မှာ ပို့လိုက်တဲ့ အီးမေးတွေ ကို Track လုပ်ပေးမယ့် MailTracker
ဒီနေ့ခေတ်မှာ အီးမေး ကို အလုပ်ကိစ္စများမှာ အသုံးပြုလာကြပြီး အီးမေးပေးပို့ ရယူမှု တွေကို နေ့စဉ် ပြုလုပ်နေကြရပါတယ်။ အရေးကြီး အီးမေးတွေကို ...